Motion Stills, iyo purogiramu inonyatso kugadzirisa yako Live Mifananidzo | IPhone nhau
Apple payakaunza Rarama Mapikicha, maitiro emunhu wese aive akanaka, asi kana uchiishandisa iwe unogara uine pfungwa yekuti ingadai yakaitwa zvirinani. Zvino Google yasvika ine algorithm nyowani (yakaratidzwa muchimiro cheMotion Stills) iyo inovandudza zvakanyanya mhedzisiro yekupedzisira, iyo ichiri kupokana kana tikafunga kusagadzikana kwakaitwa nemakambani maviri mumakore apfuura.
1 Rinoshanda sei?
Kushandisa Motion Stills hakugone kuve nyore. Iko kunyorera kunotiratidza nenzira yechimiro chenguva yakatarwa mifananidzo yese yatakatora nayo Rarama Mapikicha akagoneswa, uye nekuzvigadzirisa otomatiki kuvaratidza kare neiyo Google algorithm yakashandiswa pasina isu isu kuti tiite chero chiito.
Nzira iyo Motion Stills isingazivikanwe zvechokwadi sezvo iri algorithm yekambani yeMountain View, asi isu tinoziva kuti maviri akapatsanuka maitiro e kugadzikana uye kupa kupa iwo mafoto kufamba kwakanyanya uye kunonzwisisika kupfuura iko kwaishandiswa neApple nekutadza. Uye muCupertino vanofanira kucherechedza.
Hongu, ndinofunga kuita kwekungoita Izvo zvaizovewo zvinonakidza sarudzo kune vanogadzira kuti vafungisise, uye nekudaro iyo algorithm yakashandiswa pachikumbiro chemushandisi uye kwete nekukanganisa mumifananidzo yese mukutarisa kukuru kwekushandisa, nekuti izvi zvinokonzeresa kuti dzimwe nguva kunyorera hakuendi semvura sezvayaifanira.
Kunyangwe iko kushanda kuchizadzisa zvakakwana basa rayo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti haripe akawanda sarudzo uye pamwe ndizvo zvishoma zvishoma kupfuura zvaungatarisira.
Semuenzaniso, kana tichigovana Motion Stills isu tine sarudzo yeku gadzira iyo GIF faira kana kune vhidhiyo faira, asi isu hatina sarudzo dzekuzvitumira zvakananga kumasocial network akasiyana (kwete kunyangwe eGoogle). Kune rimwe divi, yega sarudzo yekumisikidza yakapihwa kwatiri ndiko mukana wekumisa ruzha. Sarudzo yekufupisa nguva yekupedzisira yaizokosheswa.
Muchidimbu, hazvigone kutaurwa kuti isu hatisi kutarisana App inonakidza kwazvo, asi isu tinofanirwa kuvimba kuti Google haiyisiyi yakasiiwa uye inoipedzisa nedzimwe sarudzo dzinotibvumidza kuve nechengetedzo yepamusoro yezvinoitika mukushandisa.
Motion Stills - GIF, Collagevakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Motion Stills, iyo app inonyatso kugadzirisa yako Live Mifananidzo